AKHRISO:- Min Bilaw Ilaa Dhammaad, Wax Walba Oo Aad Kaga Baahan Tahay Taariikhda Dalka Brazil | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA AKHRISO:- Min Bilaw Ilaa Dhammaad, Wax Walba Oo Aad Kaga Baahan Tahay...
AKHRISO:- Min Bilaw Ilaa Dhammaad, Wax Walba Oo Aad Kaga Baahan Tahay Taariikhda Dalka Brazil
Dalka Brazil oo loogu dhawaaqo Federal Republic of Brazil waa dal ka soo jeeda bortaqiis, waa dalka shanaad ee ugu balaadhan aduunka, koofurta America iyo dhammaan qaarada laatiin America-ba.
Dalka Brazil waxaa dhinaca bari ka marta badda ATLANTIC OCEAN, oo leh xeeb dhererkeedu tahay 7,491km.
Wuxuuna xuduud kala leeyahay dhinaca waqooyi dalka Venezuela, Guyana, Suriname iyo french guiana. Dhinaca waqooyi galbeedna waxaa dalka Brazil xuduud uu kala leeyahay dalka COLOMBIA, Galbeedna waxaa kaga beegan BOLIVIA iyo PERU.
Sidoo kale dhinaca koofur barina waxuu xuduud kala wadaagaa dalalka ARGENTINA, iyo PARAGUAY, halka waqooyi uu ka xigo dalka URUGUAY. Waxaa la oran karaa dalka Brazil dhammaan xuduud ayuu la leeyahay wadamada waqooyiga marka laga tago ECUADOR iyo CHILE.
Sidoo kale waa dal dhoofiya Diyaaradaha, korontada, gawaarida, dharka, kabaha, birta, cabitaanka iyo Liinta.
Dalka Brazil ayaa wax dhoofinta caalamka kaga jira darajada 23-aad.
Dalka Brazil waa wadanka 2-aad dhinaca garoonka diyaaradaha waxaa ka horeeya Mareykanka kaliya .
Wuxuu leeyahay Garoomo waa weyn oo aad u mashquul badan ku dhawaad 20 Milyan oo rakaab ah ayaa sanad walba isticmaala garoonada Brazil.
Dhinaca Diinta dadka heysta diinta CATHOLICS dalka Brazil waa 123 million cel celis ahaana waa 64%. waa dadka ugu badan ee heysta diinta Catholics hoos ka eeg heerka dadka heysta diimaha dalka Brazil.
Ciidanka Brazil waa ciidanka ugu balaadhan laatiin Amerika waxeyna ka kooban yihiin :Brazilian Army, Brazilian Navy iyo Brazilian Air Force waxeyna guud ahaan yihiin 317,199 oo ah kuwa shaqeeya . Ku darso oo waxey kaloo leeyihiin ciidan loogu yeedho Military police iyo ciidan kale oo loo yaqaan green water
Brazil 92% baabuurta taal waa cuseyb.
Warbixinta Waxaa qoray Mid Kamid ah Weriyayaasha Idaacadda Maxaliga Ah Ee Risaalla Ee fadhigeedu yahay Magaalada Muqdisho, waxaase kuusoo koobtay Shaaciye.com.